Conversica: Bata, Shingairira, Kurera uye Unokodzera Uchishandisa AI Mubatsiri | Martech Zone
Conversica inopa iyo zvoga yekutengesa mubatsiri inofambiswa neyakagadzirwa njere software. Iye mubatsiri anoshanda kungofanana nekutengesa kwevanhu mubatsiri, achisvika kune yega yega yekutungamira kwako uye nekuita yega yega mukutaurirana kwevanhu. Vanhu vanozvida nekuti mubatsiri ane hunhu, ane hushamwari uye anoteerera, achivabatanidza nekukurumidza nemunhu anogona kubatsira.
Tiri mune AI chitubu. Ini ndinofunga kukambani yega yega, iyo shanduko mune data sainzi inochinja zvakanyanya mashandisiro atinoita bhizinesi redu nekuti tichava nemacomputer anotibatsira mukubatana kwatinoita nevatengi vedu. Salesforce CEO Marc Benioff
Vabatsiri vanobata uye vanokodzera zvese zvinotungamira kuti vatengesi vagone kutarisa pakutengesa pane kukurudzira. Iyi otomatiki inogonesa yega yega lead lead kuteverwa kumusoro uye chaiyo-nguva mhinduro yakatorwa.
Mashandiro anoita AI-powered Kutengesa Mumiriri
Wako otomatiki wekutengesa mutengesi inobata mutengi nekukurumidza mutungamiriri paanosvika. Paavhareji, 35% yezvose zvinotungamira kupindura kune otomatiki mutengesi mubatsiri. Iyo otomatiki yekutengesa mubatsiri maemail kumashure uye mberi nekutungamira, kusimudzira yega yega uye kunyevera vashandi vako vekutengesa kana kufarira kuchinja kuita chinangwa chekutenga.
Wako otomatiki wekutengesa mutengesi tsvaga izvo zvinotungamira zvinoda kufona uye anowana iyo yakanakisa nhamba. Navo chakagadzirwa njere software wako otomatiki wekutengesa mutengesi anozivisa mafambiro akagadzirira kuita mukutengesa uye anowana yakanakisa nhamba yefoni uye yakanakisa nguva yekuti mutengesi afonere. Paavhareji, makumi matatu neshanu muzana emitobvu inopa otomatiki mutengesi mubatsiri nenhamba yekuwedzera yefoni, kazhinji foni. Chikurukuru, kana vatengesi vako vachishevedzera, ivo vatungamiriri vanenge vachitarisira kufona kwavo.
Wako otomatiki wekutengesa mutengesi shandisa stale inotungamira uye tengesa-kutengesa. Wako otomatiki wekutengesa mubatsiri anogona zvakare kuwana mitsva yekutengesa mikana mune stale lead, inowedzera kutengesa uye kuwana imwe kukosha kubva kune ako aripo anotungamira. Vanoda kusvika makumi matanhatu muzana ekutungamira Conversica's AI tekinoroji reengages achiri mumusika. Wako AI chaiye mubatsiri anogona zvakare kushandiswa kuyambuka-kutengesa zvimwe zvigadzirwa uye kuunganidza mhinduro pamusoro pevatengi kugutsikana.
Gadzirira CRM kushambadzira otomatiki mhinduro. Wako otomatiki wekutengesa mutengesi anogona kushandiswa kugadzirisa mhando yemitobvu uye zvirinani kuziva mikana yekutengesa kubva kune inotungamirwa inogadzirwa neanoda chizvarwa mishandirapamwe nekutengesa otomatiki maturusi akadai saPardot, Marketo kana Eloqua.
Iwo mabhenefiti eAI-inofambiswa Mumiriri Wekutengesa anosanganisira:
Sunungura reps yako kumusoro yekutengesa chaiko - Automated mutengesi mubatsiri anopatsanura mafambiro akanaka kubva kune akafa, saka vatengesi vanodzoka vanotaura chete netarisiro avo vanoda kutaura navo.
Tevera neese ega lead - Conversica inobereka zvakawanda pamabhata Zvekutengesa kwako reps - nezvose zvitsva uye zvekare zvinotungamira - uye nekudaro zvinowedzera zvinoshamisa huwandu hwazvo hwezvibvumirano zvakavharwa.
Gamuchira kutendeseka mhinduro - Mubatsiri wako anosvika nyore, zvekuti tarisiro dzakanyanya kusununguka uye kutendeseka mumhinduro dzavo kupfuura zvavaizoita ne mutengesi.
Unganidza zvakakosha bhizinesi njere - Tarisiro haisi kungodaira zviri nyore, ivo vanogovana ruzivo rwakakosha senge nhamba dzenhare, nguva dzakanakisa dzekufona, uye chinangwa chekutenga.
Natsiridza yako yekutengesa maitiro - Wako mutengesi mubatsiri anoteedzana netarisiro zvakare mushure mekupa kune wekutengesa rep - kuendesa manejimendi njere uye kugutsikana kwevatengi.
Dzorera zvakazara zvakadzidziswa mutengesi mubatsiri - Wako wekutengesa mubatsiri anosvika akanyatsodzidziswa, akakurudzirwa zvizere, uye atove akashongedzerwa neruzivo rwakawanikwa kubva kumamiriyoni ehurukuro dzevatengi.
Edza Conversica Yemahara Ona Rarama Kutaurirana Demo
Tags: aiai Assistantai virtual mubatsiriai virtual mutengesi mubatsirichakagadzirwa njerehurukurodashboardeloquamarketoruregererovirtual mubatsirichaiyo yekutengesa mubatsirirakapotsa rekutengesa timu